Semalt Expert: Heino Maitiro Akutarisa Chete Yekutengesa Mobile
Filters yepaGoogle Analytics inobatsira nenzira dzakawanda. Chinhu chokutanga uye chakakosha ndechokuti tinogona kusanganisira kana kusabvisa data kubva mumishumo yedu zvichienderana nezvatinoda uye rudzi rwemiganhu.
Unogona kuda kuona kana kubvisa deta kubva mumugwagwa unofamba, dzimwe nzvimbo dzakasiyana kana imwe nzvimbo. Oliver King, nyanzvi inotungamirira Semalt , anovimbisa kuti zvinhu zvose izvi zvinogona kuitwa nyore nyore neGoogle Analytics account.
Google profile profiles rinogona kutsanangurwa seimwe firiji inoshandiswa kuchinja kana kugadzirisa data muDashboard yako yeGoogle Analytics. Nokudaro, zvinokwanisika kuti iwe uite zvigadziro munyaya yako uye uchengetedze kuchengeteka nekuvimbika kwenzvimbo yako paIndaneti - sigelei 100 watt plus box.
Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura kuti filters yefaira yeGoogle Analytics inogona kubatsira kugadzira mararamiro anoratidza nhoroondo yakarurama nedzivo yakavimbika pamusoro pezvakabva uye maIndaneti emutokari wako. Pasinei nokuti iwe unowana maonero ako kubva kumakombiyuta ega kana madivayiri efoni, firiji yeporofita ichakupa ruzivo rwechokwadi chete. Zvinokwanisika kushandisa mafungidziro epaGoogle Analytics mumamiriro akasiyana-siyana kana wadzidza zvakazara.
Nhanho 1 - Unofanira kunge une nhoroondo yepamusoro
Nhanho yekutanga ndeyokuva nhoroondo yepamusoro usati watanga.Kana iwe usati wambosika purogiramu iyo, haugoni kuwana pfungwa yekuti magwagwa ewebsite yako anobva kupi. Tenzi wako purogiramu ichava nemashoko ose pamusoro pekutsvaga kwewebhu yako uye kuti ungashandisa nguva yako yakawanda sei.Kana wakanga uchishandisa Google Analytics kwenguva yakareba, inguva yekuongorora mabasa ewebsite yako nekugadzira nhaurirano. kuti ugadzire uye akupe iwe zvibereko zvakanaka.
Step 2- Gadzira imwe nhoroondo
Kana zvakadaro, iwe hauna kusika purogiramu. Pano tava kuzokuudza kuti ungavaka sei firiji yefaira pakarepo. Dzvanya paChirongwa chikamu mubhuku reGoogle Analytics uye sarudza MaProfile tab, inoteverwa nekutsvaga paNew Profile icon kuti utange.
Step 3 - Dzai profile profile
Kana waita purogiramu uye wapedza zvikamu zvayo zvose, danho rinotevera nderekutsvaga paIndaneti Vanoshandisa icon uye tanga mafaira nekusarudza chikamu cheMafuta. Pano iwe unogona kuumba zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa zvinoenderana nezvinodiwa uye kutanga kutarisa webhusaiti yako yepaiti pamwe nehupamhi hwayo.
Nhamba dzeGoogle Analytics dzakasvibiswa pabasa
Anenge makore matatu apfuura, zvakawanda zvemigwagwa yakashanyira neCrazy Egg blog yaive kuburikidza nemichina yekushandisa. Chinhu chinonyanya kukuvadza chinongodarika vatanhatu chete vevanyori veEndaneti vakashanyira webhusaiti vachishandura mafungiro avo. Zvakare, mauto evanhu vaifamba vachida kusvika kune imwe nzvimbo munzvimbo dzakadai sedhigiriro uye nguva pachigaro. Zvinoreva vanhu vazhinji vakashanyira nzvimbo yacho, asi vakapedza mashoma mashomanana pamapeji ewebhu. Nokudaro, kambani yakasarudza kugadzirisa zvakare nekudzorerazve Google Analytics profile filter kuti ive nechokwadi chekuonekwa kwayo nekuvimbika paIndaneti. Izwi idzva reSpanish WordPress themes rakagadzirwa kuti rive nechokwadi chokuti vashandi vanowana zvibereko zvakanaka.